- Tele RELAY တစ်ခုငျြအမွတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကင်ဆာဆဲလ်တွေအပြီး-ကုသမှုတည်လျှင် Artificial ထောက်လှမ်းရေးနှင့် biosensors detect နိုင်သည်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုလျာထားသောအလုပ်လုပ်လျှင်ကြည့်ဖို့ဖန်တီးကင်ဆာ device ကို
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ ငျြအမွတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကင်ဆာဆဲလ်တွေအပြီး-ကုသမှုတည်လျှင် Artificial ထောက်လှမ်းရေးနှင့် biosensors detect နိုင်သည်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုလျာထားသောအလုပ်လုပ်လျှင်ကြည့်ဖို့ created "ကင်ဆာ device ကို
ငျြအမွတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကင်ဆာဆဲလ်တွေအပြီး-ကုသမှုတည်လျှင် Artificial ထောက်လှမ်းရေးနှင့် biosensors detect နိုင်သည်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုလျာထားသောအလုပ်လုပ်လျှင်ကြည့်ဖို့ဖန်တီးကင်ဆာ device ကို
အဆိုပါမိုဘိုင်းကိရိယာ qui ဂျာနယ်တွင်အတွက်လေ့လာမှု selon, အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့် biosensors ကိုအသုံးပြုသည် 95.9 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိသူတို့ကလျှပ်ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာတိုက်ရိုက်ကင်ဆာဆဲလ်တွေရေတွက်အတွက်တိကျ Microsystems ကို & Nanoengineering.
"ကျနော်တို့ကလူနာလျာထားသောကင်ဆာကုထုံးအပြုသဘောဆောင်သော sponds လိမ့်မယ်ရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ဒါကမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း built" အကြီးတန်းစာရေးဆရာ Mehdi Javanmard, Rutgers University က-နယူး Brunswick မှာအင်ဂျင်နီယာကျောင်းအတွက်လျှပ်စစ်နှင့်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာဌာနလက်ထောက်ပါမောက္ခပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာကိုအတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်ကင်ဆာဆဲလ်များကိုဓာတုကုထုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများမှအထိခိုက်မခံသို့မဟုတ်ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့အရည်၏အလွန်သေးငယ်သောရေနှင့်ညီမျှကိုင်တွယ်ဒါကခေတ်မီ biosensors ပေါင်းစပ်။ "
အဆိုပါ device ကိုချက်ချင်းရလဒ်တွေကိုပေးနှင့်လူနာတွေအတွက်ပိုပြီးစိတ်ကြိုက်ကြားဝင်အဖြစ်ရောဂါပိုကောင်းစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ထောက်လှမ်းဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ကလျင်မြန်စွာနောက်ထပ်ထိပ်တန်းမော်လီကျူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ချက်ချင်းရလဒ်အတွက်ခွင့်ပြုခြင်း, em ကိုရှုတ်ချရန်မလိုဘဲဆဲလ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိထုတ်ကုန်ဆဲလ်များ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေကန့်သတ်, အစွန်းအထင်းအပေါ်ကိုအားကိုးပါ။
"ကျနော်တို့ကဟော်မုန်း၏လူနာတုံ့ပြန်မှုများနှင့် personalization အကဲဖြတ်များအတွက် Point-of-စောင့်ရှောက်မှုအဖြေရှာတဲ့ tool ကိုအတိုင်းဤစက်ပစ္စည်းအသစ်သုံးပြီးတည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်" ဟုအဆိုပါလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။
co-စာရေးသူကထိုသို့ယောသပ်သည် R. Bertino, နယူးဂျာစီနှင့် Rutgers ၏ Rutgers ကင်ဆာအင်စတီကျုမှာနေထိုင်သူသုတေသီရောဘတ်ဝုဒ်ဂျွန်ဆင် Medical School မှပါမောက္ခများနှင့်သူ့အဖွဲ့ယခင်ကချဉ်းကပ်ထိုသို့သော B-ဆဲလ် lymphoma အတွက်သူများသည်အမျှကုထုံးပစ်မှတ်ကင်ဆာဆဲလ်တွေရှိပြီးအဲဒီတီထွင် မျိုးစုံ myeloma နဲ့ epithelial carcinoma ။ ဒါသာအကျိတ်ဆဲလ်များကိုလျာထားသောနေကြသည်တစ်ခု antibody ကိုတစ်ဦးဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုမူးယစ်ဆေးချည်နှောင်နှင့်ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်တွေနှင့်အတူအပြန်အလှန် minimize လုပ်။ သူတို့၏အကျိတ်ဆဲလ်များကိုသက်တမ်းကုန် matriptase ဟုခေါ်သောပရိုတိန်း generate လျှင်လူနာကဒီကုထုံးအပြုသဘောဆောင်သော sponds ပါလိမ့်မယ်။ စံဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုအနေဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလျော့ချနေစဉ်အတော်များများလူနာအကျိုးရှိမည်။
"ဤကဲ့သို့သောဝတ္ထုနည်းပညာများစံ-of စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုတကယ်-ရှိသည်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့်လူနာနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကုန်ကျ-ငွေစုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်" ဟု Bertino ကဆိုသည်။
အဆိုပါ Rutgers အဖွဲ့သည်တစ်ဦး Target anticancer မူးယစ်ဆေးအမျိုးမျိုးပြင်းအားနှင့်အတူကုသကင်ဆာဆဲလ်နမူနာကို အသုံးပြု. သူတို့၏စက်ပစ္စည်းအသစ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အဆိုပါစက်ကသေးငယ်တဲ့အပေါက် fluidic ဖြတ်သန်းအဖြစ်ဆဲလ် icts လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီအပေါ်အခြေခံပြီးအသက်ရှင်လျှက်ရှိမရှိစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းစမ်းသပ်မှုလူနာထံမှအကြိတ်နမူနာခဲ့ကြသည်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသုတေသီများက device ကိုကုသမှုအုပ်ချုပ်မီကုထုံးလူနာကင်ဆာ၏နမူနာများမှာစမ်းသပ်ဖို့နောက်ဆုံးတော့ကင်ဆာအသုံးပြုလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ကပံ့ပိုး Rutgers တက္ကသိုလ်. မှတ်ချက်: အကြောင်းအရာစတိုင်နဲ့အရှည်အဘို့အ edited နိုင်ပါသည်။
မိန်းမသူမဟာ '' ကင်ဆာ-အခမဲ့ '' ခေါင်းလောင်းချိုးဖဲ့ဒါကကင်ဆာရိုက်နှက်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့